News | Page 89 | Radio Veritas Asia
St. Colanbam 2
St. Colanbam 1
His Emimence Charles Bo of Archdiocese of Yangon officially announced it from the studio (N7) of Radio Veritas Asia,
Bishop John Saw Yaw Han (Auxiliary Bishop of Archdiocese of Yangon, deliveredaspeech in Catholic Major Seminary. Bishop said, "Those who really believed in God are to be ordained but not those who do not believe in God. We are
Bishop Felix, Diocese of Kalay, President of Catholic Bishop Conference of Myanmar. "... being confident of this, that he who beganagood work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Phil. 1:6 Here (CMS) is the
ခရစ်ယာန် အယူဝါဒရဲ့ ပထမရာစုနှစ် အချိန်တည်းကစပြီး ဆေးကြောခြင်း စက္ကမင်တူး ခံယူချိန်မှည အ၀တ်ဖြူသစ် ကို ၀တ်ဆင်ခြင်းဟာ ခရစ်တော်နဲ့ သန့် ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားအားဖြင့် သစ်လွင်တဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာ ရဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သံပေါလုက
တနင်္ဂနွေနေ့ ရေဂျီးနာချယ်လီ မေတ္တာရွတ်ဆိုရာမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်က သခင်ယေဇူးရဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ တက်ကြွခြင်းဟာ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ ဖခမည်းတော် လက်ယာဘက်မှာထိုင်းပြီး ဘုန်းတန်ခိုး ပြည့်စုံတဲ့နေရာ ကောင်းကင်ကို ငေးမျှော်ကြည့်ဘို့တွန်းအားပေး
၂၃၊၅၊၂၀၁၈ တနင်္ဂနွေနေ့ က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်က ခရစ္ဆမားအားပေးခြင်း စက္ကရမင်တူး အကြောင်းကို ဦးတည်ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းတော်ရဲ့ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအရ ပန်တော့ကော့စ် ပွဲတော်ကို ကျင်းပပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ခရစ္ဆမားအားပေးခြင်း စက္က